ဖက်ရှင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားများအတွက်သားရေသိုင်းကြိုးခြင်း simulation သုံးမျက်လုံးအလင်းအား OU Dial - shoppingdirect24.com - SD24
Home > ဖက်ရှင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားများအတွက်သားရေသိုင်းကြိုးခြင်း simulation သုံးမျက်လုံးအလင်းအားအဆောက်အဦးအပြင် Quartz စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Dial
ဖက်ရှင်စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားများအတွက်သားရေသိုင်းကြိုးခြင်း simulation သုံးမျက်လုံးအလင်းအားအဆောက်အဦးအပြင် Quartz စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Dial
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 23,50
Black က - € 23,50 EUR Black & White - € 23,50 EUR ဘရောင်း & White က - € 23,50 EUR ဘရောင်း & Black က - € 23,50 EUR
shoppingdirect24.com --- ETSY.COM အပေါ်ကိုရှေးခယျြထုတ်ကုန်ကိုကြည့်ပါ --- သင့်ရဲ့ဘာသာစကားနှင့်ငွေကြေးကိုကို ရွေးချယ်. : http://lnk.direct/7tz8 --- အခမဲ့ရေကြောင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှသာ 25 EURO လှည်းတန်ဖိုးကိုမှ။ --- ထုတ်ကုန်ဓါတ်ပုံများအတွက်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန် zoom ကို / မှန်ဘီလူး function ကိုသုံးပါ။ ယောက်ျားရဲ့နာရီ Quartz စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ယောက်ျားအလင်းအားအဆောက်အဦးအပြင်အားကစားသံမဏိစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
အရောင်: အနက်ရောင်အနက်ရောင် & White ကဘရောင်း & အနက်ရောင်ဘရောင်း & White,
အချင်း4စင်တီမီတာ Dial;
အထူ 0.8 စင်တီမီတာ;
သိုင်းကြိုး width ကို2စင်တီမီတာ
အလေးချိန်: 30 ဂရမ်နှင့် ပတ်သက်.
package ပါဝင်သည်: 1pcs
Mens နာရီသားရေ Band အင်နာလော့အလွိုင်း Quartz လက်ပတ်နာရီတစ်လုံး
ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 22,50
နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားကိုစောင့်ကြည့်နှင့်အတူရေစိုခံရောင်စုံဖန်သားပြင် Smart Watch လက်ကောက်
ရောင်းဈေး € 71,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 114,00 ရောင်းချခြင်း
သတိရအောက်မေ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ Elvis Presley ဆီမှာဆိုရင်ဖက်ရှင်သံမဏိကြားနေစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့လက်ကောက်ဝတ်အဆိုပါ Hillbilly ကြောင် Quartz စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့
ရောင်းဈေး € 22,50 ပုံမှန်စျေးနှုန်း € 34,00 ရောင်းချခြင်း